XOG:- Shirka madasha qaran oo la isku mari la’yahay iyo madaxweyne Xasan oo u amba-bixi doono Itoobiya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shirka madasha qaran oo la isku mari la’yahay iyo madaxweyne Xasan oo u amba-bixi doono Itoobiya
Shirka madasha wadatashiga qaran ayaa maalintii sedaxaad ka socdo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kaas oo soo bilawday 3-dii bishaan, islamarkaana la filayay in habeenkii xalay la soo gaba gabeeyo.
Madaxda shirka madasha ayaa weli ka doodaya dhowr qodob oo weli la isku mari la’yahay, waxaana qodobadaasi ka mid ah, xilliga rasmiga ah ee la qabanaayo doorashada sanadkaan ka dhaceeyso dalka Soomaaliya.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno goobta uu shirka ka soconaayo ayaa sheegaya in qaar ka mid ah madaxda shirka ay mar soo jeediyeen in doorashooyinku ay dhacaan bilaha September iyo October ee sanadkaan.
Doorashada ayay sheegeen inay u kala dhici doonto tan gudoomiyaha baarlamaanka oo dhici doonto bisha September, halka bisha October-na la dooran doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Qaar kale oo ka mid ah madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ayaa qaba in dowladda federaalka Soomaaliya ee haatan jirta muddo sanad iyo wax la jira loo kordhiyo waqtigeeda, si loo dhameystiro waxyaabaha qabyadda ah.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta u amba-baxo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo uu uga soo qeyb gali doono shir socon doona muddo hal maalin ah.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama go’aanka kama dambeyska ah oo ay soo saari doonaan madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ee haatan ka soconaayo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdihso, iyadoona dhinaca kale dadka Soomaalida ah ay weli isha ku haayaan natiijada kama dambeyska ah ee kasoo bixi doonta shirkaas.